Indlela yokushicilela kwakhona ibali kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 22, 2019 0 IiCententarios 1102
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo yeli xesha. Imvelaphi yayo ibhekisa phantse kwishumi leminyaka, nangona kunjalo ukuthandwa kwayo sele inyukele phezulu ngokukhawuleza. Inethiwekhi yezentlalo eyaziwayo, eyona nto kugxilwe kuyo kukupapashwa kwezithombe ngabalandeli kunye Zithandwa zobugcisa, Ivele. Iinguqulelo zamva nje ze-Instagram zizisa uluhlu lwezixhobo, nganye inomdla ngakumbi kunenye. Enye yezona zisetyenziswayo kumaxesha anamhlanje ngamabali e-Instagram abhengezekwayo. Ke ngoko, siya kukufundisa indlela yokuphinda upapashe ibali kwi-Instagram, ngale ndlela ungenza umboniso wakho ubambe ngakumbi amxesha zamabali.
Inethiwekhi yezothutho eyandisiweyo ine-600 yezigidi abasebenzisi emhlabeni, onke asebenza ngenyanga. Ukongeza, uhlaziyo lwayo lonyukile ukusukela oko kuthengwe ngalo Facebook isuka kwi2012. Ngapha koko, uhlaziyo lweqonga ngalinye lizisa uhlengahlengiso olungcono lwezixhobo ezinazo. Okanye entsha e indlela yokusebenza zokuthumela iziganeko zomsebenzisi.
Esi sicelo sikhona ngeentlobo ezahlukeneyo Iisistim ezisebenza ngokuhambisa Ukuba phakathi kwabo yi-Android, i-iOS kunye neWindows. Ukuba umsebenzisi unqwenela ukuba neyakho le app kwisixhobo sabo esiphathwayo, kufuneka bangene kuphela abo babandakanyekayo ivenkile kwifowuni yakho Oku kunokuba yiGoolePlay, AppStore okanye iMicrosoftStore. Nje ukuba ifunyanwe, kufuneka uzikhuphele kwaye emva koko uzifake kwisixhobo. Ngale ndlela, ungasebenzisa unxibelelwano oluvunyiweyo.
Unokuba nomdla indawo yokuthenga ngokuthandayo kwi-Instagram.
Esi sixhobo esithile senziwe ngendlela yokuba umsebenzisi angafanele layisha iprofayile yakho Ngayo yonke into ofuna ukuyipapasha. Ukusukela kwimvelaphi yayo isithuba seminyaka embalwa edlulileyo, ukuthandwa kwayo bekukhula, ngakumbi phakathi kwabantu abancinci. Ukusukela, olu khetho luzakuvumela umsebenzisi ukuba athumele yonke imicimbi yemihla yabo kwaye baya kuba nobomi bexesha le-24 iiyure, kwaye isusiwe ngokwakho
Ayisiyiyo le kuphela, isicelo siyakuvumela hlela iifoto zakho yamabali e-Instagram kwaye ubenze babe nomtsalane ngakumbi kwaye bayile. Kuba unokukhetha ukongeza iifilitha, ii-emojis, izitikha kunye nabanye. Ngale ndlela umsebenzisi uya kuba nakho ukuvumela ukucinga kwakhe kubhabhe kwaye adale intsha neyoqobo Amabali e-Instagram. Ngapha koko, xa usongeza isicatshulwa kupapasho, iqonga longeze inani leefonti, ukuze kulungele ukhetho lomsebenzisi.
Ungayiphinda kanjani ibali kwi-Instagram?
Ukuba umsebenzisi unqwenela ukuphinda apapashe ibali kwi-Instagram, kuya kufuneka bazi ukuba inye kuphela imfuneko. Le yile umaka kolu shicilelo. Ke ngoko, ngaphambi kokuba iifoto zipapashwe kumabali e-Instagram apho leileyibhile unokwabelana nabo ngamabali akho. Olu khetho lubizwa Xela uSabelo kwaye iya kukuvumela ukuba wabelane leliphi ibali apho umakishwe khona. Nokuba yinto ividiyo okanye umfanekiso, umsebenzisi wakho ukhankanyiwe, uya kuba nenketho yokongeza olo papasho kuStorie.
Nangona kunjalo, olu khetho luya kuvunyelwa kuphela kwizixhobo ezine 48 version yembonakalo ye-Instagram kwaye kufuneka isetyenziswe kuphela kwiiakhawunti zabasebenzisi ezisesidlangalaleni. Ukuba ezi mfuno ziyafezekiswa, umsebenzisi unokuphinda apapashe ibali kwi-Instagram. Kwaye ke, ukuze ukwazi ukuzalisa umda wexesha lakho ngamabali oye umakwe kuwo Iiyure zokugqibela ze-24.
Ngexeshana Beka ibali, Ukuba umsebenzisi wakho usesidlangalaleni, kuya kuvela isaziso. Esi saziso siya kukwazisa malunga nabasebenzisi abakhankanyiweyo zinokuphinda zishicilele ibali kwi-Instagram kwiiyure ezilandelayo ze-24. Kwaye ngale ndlela, xa upapasha, umsebenzisi okhankanyiweyo uya kwaziswa.
Umyalezo othe ngqo
Xa ikhankanyiwe, kufuneka ibekhona fumana umyalezo Ngenisa nebali elipapashiweyo. Kwakhona, ngezantsi nje komxholo webali kumyalezo; Ukhetho olubaluleke kakhulu luya kufunyanwa. Le iya kuba yiyo eza kuvumela "Yongeza kwibali lakho". Ngokuchofoza kuyo uya kuphumeza umsebenzi wokuphinda ubhale ibali kwi-Instagram.
Emva kokucofa ukhetho "yongeza kwibali lam", iya kukuthumela ekuqaleni kokuposwa kwebali. Ukusuka ngalo mzuzu unako hlela okanye wenze ngokwezifiso impapasho ngokuthanda kwakho. Kuya kufuneka ukongeze okubhaliweyo, emoji okanye izitikha; kwaye ngokwenza njalo ulungelelanise upapasho olukumakwe kulo. Nangona kunjalo, kwimbali igama lika umsebenzisi wokuqala, Oko kukuthi, ngubani okuthumele ilebhile.
Emva kokuba ulihlele ngokupheleleyo ibali, kwaye ulibuyise wamkelekile Kuwe kufuneka upapashe. Ukwenza oku, cofa kwithebhu yokushicilela. Emva koko, imenyu yeenketho zokupapashwa iya kubonakala. Oku kubandakanya ukupapashwa kwibali lakho okanye ulithumele komnye wabahlobo bakho. Ukuze upapashwe kwibali lakho kuya kufuneka ukhethe ukhetho olungabizi kwaye ucofe kulo "Ukuthumela". Ke, umsebenzisi uzuze impumelelo ngokushicilela ibali kwi-Instagram.
Unokuba nomdla ngubani oyekayo ukukulandela kwi-Instagram.
1 Iqonga le-Instagram
3 Ungayiphinda kanjani ibali kwi-Instagram?
3.2 Umyalezo othe ngqo